Uvula ngekusasa lemidlalo yePSL - Ilanga News
Home Ezemidlalo Uvula ngekusasa lemidlalo yePSL
Uvula ngekusasa lemidlalo yePSL
Kuvela ezithi onondweba abayihlolelwa iCovid-19
UVALO ngekusasa lemidlalo ye-Premier Soccer League (PSL) emuva kokuvela kwezindaba ezethusayo zokuthi kudala iSouth African Football Association (Safa) yagcina ukuhlolela iCoronavirus onondweba bayo abaphatha imidlalo yeDStv Premiership ne-GladAfrica Championship.
Kuthiwa iSafa yagcina ukuhlola onondweba ngesikhathi beya kwi-bio bubble eGauteng, eyayihlelelwe ukuba kuqedelwe imidlalo yangesizini edlule yePSL.
U-Adv Tebogo Motlanthe oyisikhulu esiphezulu esibambile kwiSafa, utshele ILANGA izolo ukuthi lolu daba bazolubhunga emhlanganweni abahlela ukuba nawo nazo zonke izinhlaka ezithintekayo, kubalwa nePSL ngokuzokwenziwa ukuzama ukugwema ukubhebhetheka kweCoronavirus kubadlali. Uthi kuningi okumele kubhekwe yize bengasemukeli isenzo sokuthi onondweba kabazange bahlolwe.
“Okwamanje ngizohlangana nekomiti eliholwa nguDkt Thulani Ngwenya ukuthola yonke imininingwane ngalolu daba ngoba lubucayi, kakumele luthathwe kalula.
“Phela lufaka impilo yabantu ngakho kakumele sibe budedengu ngalo. Okunzima kakhulu wukuthi onondweba ungabahlola namuhla kodwa basuke besazobuyela emizini yabo. Yingakho ngihlela ukubonana nazo zonke izinhlaka ezithintekayo ngokushesha,” kusho uMotlanthe okusanda kwelulwa inkontileka yakhe kulesi sikhundla okulindeleke ukuba kumenyezelwe ngokusemthethweni ozosiqhoqhobala ekupheleni kwale nyanga.
U-Abdul Basit Ebrahim ophethe onondweba kwiSafa, uvumile ngoLwesihlanu kusihlwa ohlelweni lukaRobert Marawa, iMSW ukuthi selokhu onondweba bagcina ukuhlolelwa iCoronavirus ngesikhathi se-bio-bubble.
Uthi kule sizini entsha kabakaze bahlolelwe iCovid-19.
“Ngikholwa wukuthi abaholi bethu kwiSafa bazozama ukuthola isixazululo esiphusile ngoba kuwudaba olungadingi ukuthathwa kalula lolu ngenxa yobucayi balo,” kusho u-Ebrahim.
Imizamo yokuthola iPremier Soccer League (PSL) iphunzile kwazise ucingo lukaMato Madlala oyisikhulu esiphezulu kule nhlangano belungena kodwa lungabanjwa.
Nokuthola uvo kwehhovisi likaNgqongqoshe wezeMidlalo, uNathi Mthethwa kayiphumelelanga njengoba uMickey Modisane noMasechaba Ndlovu abasebenza kulona bebengazibambi izingcingo.
Kubukeka isimo siba sibi kunobhutshuzwayo wakuleli njengoba beqhubeka nokuhaqeka abadlali.
Previous articleBabhekene nenselelo enzima abangcwabi
Next articleUyabalisa “ngokudliwa kwefa lomyeni wakhe”